Sinina fikosoham-bary, kapila fanapahana resina, kapila fanapahana vy, fantsom-bozaka fanapahana zoro, orinasa mpamokatra kapila fanapahana ary mpanamboatra | Boda
Fitotoana kodiarana, fanapahana fanapahana resina, kapila vy fanapahana, fantsom-bozaka fanapahana zoro, kapila fanapahana
Ny fitotoana kodia dia iray amin'ireo fitaovana fitotoana lehibe indrindra amin'ny fitotoana. Ny kodia fikosoham-bary dia karazam-batana misy porosy izay vita amin'ny fanerena, fanamainana ary fanendasana rehefa avy nampidirina binder ho marokoroko. Noho ny fitaovana marokoroko, ny fatorana ary ny fizotry ny famokarana, samy hafa be ny toetran'ny kodiarana fikosoham-bary, noho izany dia misy fiatraikany lehibe amin'ny kalitaon'ny fikolokoloana, ny famokarana ary ny toekarena.
Ny kodia fikosoham-bary dia iray amin'ireo fitaovana fitotoana be mpampiasa indrindra. Izy io dia azo ampiasaina amin'ny fikolokoloana henjana, fikosoham-bolo fanoratana, fikosoham-bary tsara, fametahana ary fanapahana ny faribolana ivelany, faribolana anatiny, fiaramanidina ary profil maro samihafa momba ny asa vy na tsy metaly.
Ny toetoetran'ny kodiarana fitotoana dia voafaritra amin'ny alàlan'ny fanakorontanana, ny haben'ny sombiny, ny fatorana, ny hamafiny, ny rafitra bitika, ny endrika ary ny habeny.
1. Araka ny abrasive ampiasaina, dia azo zaraina ho abrasive tsotra (corundum sy silicon carbide, sns.) Kodiarana fikosoham-bary, voajanahary voajanahary mahery vaika mahery sy (diamondra sy toradroa boron nitride boride, sns).
2. Azo zaraina ho kodiarana fitotoam-bary izy io, kodia fikosoham-baravarankely, kodiarana fitotoana varingarina, kodiarana miendrika kapoaka ary kodia fikosoham-bary mifanaraka amin'ny endrika; azo zaraina ho kodiarana fitotoam-batana, kodiarana famolahana resin, kodia fikosoham-bary ary kodiarana fitotoana vy arakaraka ny fatorana. Ny masontsivana lehibe mampiavaka ny kodiarana fitotoam-bary dia ny abrasive, viscosity, henjana, fatorana, endrika, habe, sns
Amin'ny fizotry ny famokarana dia tokony hampiasaina hikosehana ny fehikibo ny kodia emery. Amin'ny ankapobeny, ny kodiarana fitotoana dia tokony hesorina ary diovina aorian'ny fiasan'ny 5-7 andro. (misy potipotika vita amin'ny fingotra ao aminy, izay miraikitra amin'ny tampon'ny emery aorian'ny fikorontanan'ny hafanana avo, ka sarotra ny manadio azy.)
1. Fiarovana ny tontolo iainana, tsy misy ketône sy hydrocarbons halogenated.
2. Aza manimba kodiarana emery
BOSENDA Steel Cutter / Grinding Wheel / Metal Cutting Disc / Steel Cutting Disc, miaraka amin'ny kalitaon'ny indostrialy, manapaka ny karazana metaly rehetra, ho an'ny vy tsy misy vy, vy vy, vy, fantsom-by, faritra misy azy, toy ny baravarankely, fantsom-pitaterana, sns .; inôksa. Akora voafantina, ny fampiasana fasika tsara kilasy voalohany, corundum kristaly tokana, corundum fotsy, corundum volontsôkôlà sy resina, harato fanamafisana fibre nohamafisina, fampiasana azo antoka kokoa.
Ny vokatra maranitra sy mahazaka akanjo, ny sisiny manapaka tsy mainty, milamina ny fanapahana ary tsy misy fianjerana na sombina. Ny fanapahana karazana vy vy tsy misy fangarony, incision milamina, tsy vava mirona, fanoherana ny hafanana avo, fiarovana sy porofo-mipoaka, antoka ara-kalitao, azo takiana ho takarina. Manolotra andian-kapila fanapahana kapila / metaly fanapahana vy izahay.
Previous: Fitotoana diamondra, fitotoam-bato, fitotoana vato, fitotoana vato, fitotoana vato
Manaraka: Sombin-kazo vita amin'ny ala, alim-bary vita amin'ny aliminioma, antsy boribory karbida, fitaovana fanapahana
Diamond fanapahana faribolana, diamondra tsofa, seramika ...
Sombin-kazo vita amin'ny hazo, alim-bary vita amin'ny aluminium, karbô ...
Fitotoana vatosoa, fitotoana vato, marbra, grani ...